मैले «पूर्वावलोकन DirectX 10» बक्स फेला पार्न सक्दिन FSX सेटिङमा। मैले के गर्नु पर्छ? - Rikoooo
म FSX को सेटिङ मा «पूर्वावलोकन DirectX 10» बक्स पत्ता लगाउन सक्दैनन्। म के गर्नुपर्छ?
पहिलो, तपाईंले FSX-SP2 आफ्नो कम्प्युटर मा स्थापित छ कि जाँच गर्नुहोस्। वास्तवमा, « DirectX 10 पूर्वावलोकन तपाईं SP2 प्याच स्थापित गरेका छन् भने »मात्र देखिन्छ वा तपाईं FSX गतिवर्धन वा FSX गोल्ड वा FSX स्टीम संस्करण भने।
तलका दुवै पैच डाउनलोड गर्न सक्छन्
को SP1 डाउनलोड
को SP2 डाउनलोड